Shina: Miparitaka Ny Adihevitra ‘Tsy Fahafahana Ny Fanaovana Sesitany’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2012 8:50 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Español, Italiano, Français, English
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Fifandraisana Iraisam-pirenena & Fiarovana ity lahatsoratra ity.
Koa satria nihazakazaka hankany amin'ny fahafahana i Chen, azo heverina ny nitsoahany tany amin'ny Masoivoho Amerikana. Fony tany amin'ny masoivoho kosa anefa, nanao fanambarana nahatalanjona i Chen: tsy te-hiala an'i Shina izy ary tsy mila toerana hialokalofana. Raha olana goavana ho an'ny Etazonia i Chen, toy izany koa Etazonia ho an'i Chen.
Namelona indray ny adihevitra iray momba ireo mpomba sy mpanohitra ny fanaovana sesitany ny raharahan'i Chen, izay efa nisy hatramin'ny nisian'ireo hetsi-panoherana tany Tiannamen: Ho very fanohanana sy fahefana ve i Chen raha miala an'i Shina izy? Ary hamela azy hiverina any an-toerana ve ny governemanta taorian'ny fifampikasohany tamin'ny Etazonia?
Fony nitsoaka izy, mafana fo nalaza iraisam-pirenena i Chen. Ary indrindra, karazana mahery fo [en, zh] izy teo imason'ireo mpankafy ny media sosialin'ny fiaraha-monina Shinoa. Na teo aza ny didy jadona, tondraky ny tsikera [en, zh] mahakasika an'i Chen tao amin'ny media sosialy Shinoa sy eran-tany.
Manambara i Roy Berman, avy ao amin'ny bilaogy Mutantfrog:
Mamaly i M-Bone:
Nanatanteraka hetsika fihilangilanana i Chen, amin'ny fandraisana azy ho olom-pirenena ara-dalàna any Shina raha [mbola] miantoka ny ainy. Na hafahafa aza ny fahitana izany, nangataka ny governemanta Shinoa izy hanadihady ny “fandratrana tsy rariny” nataon'ireo manampahefana any an-toerna taminy. Tamin'izany ihany, nanaiky fivoahana ara-dalàna izy rehefa tonga saina fa na ny ainy na ny an'ny fianakaviany dia samy tsy ho voaaro any Shina: mandao ny tanindrazana mandritra ny fotoana maharitra hianatra any Etazonia, “tahaka ny olom-pirenena Shinoa hafa ihany,” araka ny nambaran'ny governemanta.
Tom, avy ao amin'ny bilaogy Seeing Red in China, manoratra:
Miady hevitra momba ny safidin'i Chen hianatra any ivelany ny bilaogy Sinocism:
Raha ny marina, mety efa simba ny fahatokiana an'i Chen noho ny fitadiavany fialofana tany amin'ny Masoivohon'i Etazonia. Nanisy azy ny mediam-panjakana, toy ny hanohitra ny fanohanana naseho tao amin'ny media sosialy. Nanoratra ny Global Times:
Mbola baraingo mipetraka ny hamelan'ny governemanta Shinoa an'i Chen hiverina an-tanindrazana na tsia. Araka ny voalazan'ilay Shinoa mpanohitra any an-tsesitany, Yang Jianli , “tsy fahafahana ny fanaovana sesitany. Ho an'i Chen, tahaka ny ho ahy ihany, ny fisidinana tena izy mankany amin'ny fahafahana dia ny tapakila fodiana an-tanindrazana.”
Notarihan'ny ISN (Tambajotra Fiarovana Iraisam-pirenena) ity lahatsoratra ity sy ny dikanteny amin'ny teny Espaniola, Arabo ary Frantsay, ho fiaraha-miasa hikarohana ireo feom-bahoaka mikasika ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ireo olana amin'ny fandriampahalemana eran-tany. Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy ISN, jereo eto ireo tantara mitovitovy amin'izany.
Soratra miverina: China: Sparking the ‘Exile is Not Freedom’ Debate « Internet & social change
26 Oktobra 2012, 18:02